बुद्ध र ‘अछुत’
बुद्ध वैशाली पुग्दा सैनिकले एउटी बालिकाको पिछा गरिरहेका थिए । बालिका निकै डराएकी थिइन् । भाग्दाभाग्दै उनी बुद्ध उभिएको स्थानमा पुगेर रोकिइन् । बुद्धले नजिकै रहेको कुवातिर देखाउँदै बालिकालाई भने– नानी, यो कुवाबाट पानी निकाल र आफू पनि पिऊ र मलाई पनि देऊ है ! सैनिक पनि त्यहीँ पुगे । बुद्धले हातले सैनिकलाई रोकिन संकेत गरे । बुद्धको कुरा सुनेपछि बालिकाले डराउँदै भनिन्– साधु महाराज, म अछुत हुँ । मैले कुवाबाट पानी निकाल्दा पानी दूषित हुन्छ । बुद्धले फेरि भने– पुत्री, पहिले तिमी पानी निकालेर देऊ न ।
वैशाली नरेश पनि त्यहीँ पुगे । उनले बुद्धलाई देखेपछि निहुरेर नमन गरे । बुद्धलाई तिर्खा लागेको थाहा पाएपछि सुनको घडामा जल मगाएर अर्पण गरे । बुद्धले सो पानी अस्वीकार गर्दै बालिकालाई पुनः कुवाबाट पानी निकालेर दिन अनुरोध गरे । यसपटक बालिकाले केही साहस जुटाइन् र कुवाबाट पानी निकालेर बुद्धलाई दिइन् र आफूले पनि पिइन् ।
बुद्धले बालिकासित उनको डरको कारण सोधे । बालिकाले भनिन्– मैले दरबारमा गीत गाउने मौका पाएँ । मेरो गीत सुनेर राजाले आफूले लगाइराखेको माला निकालेर मलाई पुरस्कार दिनुभयो । तर, त्यति नै वेला कसैले म अछुत भएको उहाँलाई बताइदिएपछि उहाँले मलाई जेल हाल्ने आदेश दिनुभयो । अनि म भागेर यहाँ आएँ ।
बुद्धले राजालाई भने– महाराज ! त्यति मिठो गीतले तपाईंलाई आनन्दित गराउन सक्ने बालिकालाई तपाईंले अछुत भनेर सजाय दिन खोज्नु बिल्कुलै गलत हो । कुनै मानिसलाई छुत र अछुत भनेर कित्ताकाट गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । यो तपाईंले ठीक गर्नुभएन । बुद्धको कुरा सुनेपछि वैशाली नरेश लज्जित भए ।